International Nightlife Association na-agbachitere ebe obibi abalị dị ka nchekwa
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » omenala » International Nightlife Association na-agbachitere ebe obibi abalị dị ka nchekwa
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • omenala • Akụkọ Ahụike • News • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa na Spain • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Nwere ike 27, 2021
Industrylọ ọrụ na-ahụ maka ndụ abalị nwere ike ịbụ ihe ngwọta maka ọrịa na-efe ugbu a ebe ọ nwere ike ịbụ isi nchọpụta mbụ yana ndị isi na-achịkwa ma na-eme ihe dịka nchekwa iji gbochie mgbasa nke nje ahụ.
Ọ dị mma ikwu na ọgba aghara na nnọkọ oriri na-akwadoghị bụ n'ihi enweghị onyinye ndụ abalị
Imechi ala ịgba egwu, enweghị ike ị serveụ mmanya na-aba n'anya, na ịmachi awa mmechi abụghị nhọrọ bara uru
Mgbochi na-ebelata n'ụwa niile mana ndụ abalị ka na-enwe oke oke
Ọnwa ndị a gara aga emeghewo ụzọ maka ọtụtụ ule na-aga nke ọma na-eme nke ọma na oghere ndị na-ahụ maka ndụ abalị na ule COVID-19 gara aga. N'oge na-adịbeghị anya, gọọmentị UK ekerịtala data dị mma nke ihe omume pilot nke mere na Liverpool (n'okpuru Mmemme Nchọpụta Omume nke UK) ebe enweghị mmekọrịta mmadụ na ibe ya ma ọ bụ ihe mkpuchi akwadoro. Otu n'ime ihe ndị bụ isi bụ na mgbe a na-ewepụta nyocha na ịrụ ọrụ nke ọma ventilashion, a na-ebelata ihe ize ndụ nke nnyefe nke COVID-19. Kpamkpam, n'etiti ndị bịara 60,000 na 9 nnukwu ihe omume, naanị 15 nwalere nke ọma, yabụ gọọmentị ga-eji ihe akaebe sitere na Mmemme Nchọpụta Omume iji dozie amụma ya maka nloghachi nke ìgwè mmadụ gaa ebe ihe nkiri gụnyere ụlọ ihe nkiri, sinima, na ụlọ ịgba egwu abalị. .
Fọdụ ihe omume ndụ abalị emeela n'obodo ndị dị ka Amsterdam, ebe mmadụ 1,300 bịara mmemme egwu na Ziggo Dome ezubere iji nyochaa ihe egwu nke imeghe ebe ndị a ma mee atụmatụ maka ime ka mmachi nke mgbochi mkpọchi. Nakwa na Spain, INA's Gold Member Venue Sala Apolo Barcelona mere ihe omume na-aga nke ọma ma nwee egwu egwu na-aga nke ọma na Palau Sant Jordi Barcelona na ndị 5,000 na ọrụ nke ule gara aga, ihe mkpuchi FFP2 mana enweghị mmekọrịta mmadụ na Machị gara aga. N'oge na-adịbeghị anya, na Sitges, Ogwe na ụlọ oriri na nkwari abalị meghere ihe karịrị ndị ọrụ afọ ofufo 400 nwere nyocha gara aga ma gosipụta na ha na-agba ọsọ nke ọma ọ bụ ezie na ekenyebeghị nsonaazụ ahụ.
Ọ dị mma ịsị na ọgbaghara na nnọkọ oriri na ọ iwu na-akwadoghị bụ n'ihi enweghị onyinye abalị na iwu yana mkpa mmekọrịta mmekọrịta n'etiti ndị na-eme egwuregwu "agụụ na-agụgbu mmadụ" ọkachasị mgbe ha tachiri obi na nsonaazụ nke ịnọ na iche iche na ịgbaso usoro iwu na-achịkwa. Mmachibido iwu na-ebelata n'ụwa niile mana ndụ abalị ka na-abụ oke oke, na-akpata ọgba aghara n'okporo ámá na omume na-enweghị nsogbu nke ndị mmanye iwu agaghị enwe. N'ihi nke a na ọtụtụ nyocha nke ndị nnwale nke emere na-egosi na ọrụ ndụ abalị nwere ike ịgba ọsọ na nyocha oge, oge iji nwetaghachi ndụ ọhụụ nke abalị bụ ugbu a.
Ocio de Ibiza na-anya ule ọkwọ ụgbọelu na June iji kpughee imeghe
Ibiza si Nightlife Association (Ocio de Ibiza) nke na-agbaso na INA arịọwo Gọọmentị Balearic ka o guzobe ụzọ ụzọ doro anya na usoro ịmepe ụlọ ọrụ na agwaetiti ahụ gụnyere usoro a kapịrị ọnụ nke oghere, oge mmeghe na mmechi, yana usoro mgbochi nke a ga-etinye n'ọrụ ụbọchị niile na ụlọ abalị.
Nkwupụta ndị otu ahụ egosila ndị gọọmentị nchegbu nke ndị were ọrụ na ndị ọrụ na ụlọ ọrụ ahụ maka enweghị nkọwa nke nchịkwa mgbe ha guzobere ụzọ maka mmeghe nke ụlọ ọrụ abalị. Thetù ahụ tinyekwara atụmatụ ndị a na-eme n'akụkụ ndị ọzọ nke Spain na ụwa site na ule ule na tebụl iji hazie ọdịnihu imeghe ogige ahụ, ahụmịhe ndị a na-ahazi maka ọtụtụ akụkụ site na nkwado nke ndị isi ahụike mpaghara.
N’echiche a, ndị otu ahụ chọrọ ma nwee akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ iji mepụta nnwale ọkwọ ụgbọ elu iji chọpụta etu esi agaghachị ọrụ n’enweghị nsogbu ma nwee “oke ihe doro anya” ọnọdụ nke ogige ahụ ga-ezute. Ocio de Ibiza na-ekwughachi ebumnuche ha na ezigbo mmekọrịta na nkwukọrịta ha na ochichi ahụ, kwenyesiri ike na ọ bụ naanị isonyere ndị agha ka ọ ga-ekwe omume Ibiza ịbụ ebe dị mma, nke mara mma, nke achọrọ na, na-achọ.
Njem nlegharị anya Jamaica na -enye ndị ọrụ afọ ofufo Olympic nke Japan onyinye ...